Soo dejisan Deer Hunter 2.11.7 – Vessoft
Soo dejisan Deer Hunter
Deer Hunter – ciyaarta dejiyaan in ay soo ugaarsadaan xoolaha ee geesood kore ee dunida oo dhan ah. Deer Hunter u saamaxaaya in ay u safraan iyo ugaarsadaan noocyada badan ee xoolaha ee kaymaha, buuraha reer Alaska, savannas Afrika iyo gobollada kale ee qalaad. Ciyaaryahanka uu lacagta play iyo koobab kala duwan ee hawsha maray ama dilka ee ciyaarta waaweyn. Deer Hunter dukaan ku leh Arsenal weyn oo rasaas, ujeedooyinka dheeraad ah iyo hub kala duwan oo u oggolaan ciyaartoyda in hub lagu iibiyey lagama maarmaan u ah hab shakhsi ah ugaadhsiga. Sidoo kale Deer Hunter taageertaa hab gaar ah ugaadhsiga kooxda la saaxiibo badan internet-ka.
Noocyada badan oo ka mid ah xoolaha iyo goobaha qalaad
Arsenal A badan oo hub ah oo leh sharaxaad faahfaahsan
Heerar badan oo kala duwan
Jiritaanka ay koobab kala duwan
Deer Hunter Software la xiriira:
العربية, English, Українська, Français... Agar.io 1.4.4
English, Français, Deutsch, Русский... 9Apps 3.0.1.8
العربية, English, Русский, Bahasa Indonesia... Google Drive 2.3.283.31.33
العربية, English, Українська, Français... Google Chrome 54.0.2840.85